hoy ny nambarany, fa maro ireo mpamily no tratran’izany, toy ny mpamily taksibe zotra 141, 162, 178, 154 ary ny 114. Eo no tsy maintsy hanaovana ny di-doha na mafy loha, satria, raha tsy manana fahadisoana aza ianao eo am-pitondrana ny fiara, dia mahita kianina sy lazaina amin’ny mpamily hatrany ireo mpitandro ny filaminana manao fisavana. Rehefa tsy manome taratasin’ny fiara indray dia valiana tsotra izao, nefa rehefa tsy manome, dia afaka herinandro, dia iharan’ny sazin’io polisy io indray, hoy ny fanazavany. Nambarany, fa raha fahadisoan’ny fiara kosa, ka ampidirina foriera ny fiara, dia ny tompony sy ny kaoperativa Fifiama ary ny mpitandro ny filaminana indray no mifanaraka amin’izany, fa tsy misy idiran’ny mpamily sy ny resevera intsony ny momba izany. Maro ny hadisoana mety ho azon’ny mpamily, ka anisan’izany ny maka sy mampidina olona amin’ny tsy “arret”, mitondra olona mitsangana. Rehefa lasan’ny mpitandro ny filaminana ny taratasin’ny fiara, dia anjaran’ny mpamily sy ny resevera no mifanaraka amin’izay, na miala amin’ny “versement”, hoy ireto mpitatitra. Raha lany daty kosa ny taratasin’ny fiara, dia ny tompon’ny fiara no maka izany any amin’ny polisy, hoy ity mpamily 135 ity. Ilaina ny fanajana ny lalàna, nefa tokony hanaja izany koa ireo mpamily rehetra manao fitaterana. Ilaina ny mitady vola, fa tsy dia manao vodihazo amin’ny “arret” iray, fa mahatonga ny fampiharana ny lalàna izany ary amin’izay mba manaja ny mpandeha hafa koa, hoy izy.